10 nzvimbo yemhuka dzesango | Chengetedza Chitima
musha > Mazano Ekufamba > 10 nzvimbo yemhuka dzesango
Eco Kufamba Matipi, Chitima Kufamba, Famba Europe, Mazano Ekufamba
Couch surfing, musasa, rwendo nenzira – kana wakamboedza nzira idzi dzekufamba, wagadzirira kusvetukira mune chimwe chinhu chitsva. Idzi nzira gumi dzinotevera dzekugadzira dzekufamba dzinoita kuti iwe uwane zviitiko zvitsva uye kuongorora yakasarudzika isingazivikanwe kwekuenda.
Rail senga ndiyo zvakatipoteredza ushamwari nzira yokufamba. Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel uye chakaitwa Chengetedza Chitima, The CHEAPEST Train Tickets Website In The World.
1. nzvimbo yemhuka dzesango: Volunteer For A Chikonzero
Kuita zvinokurudzira munharaunda yaunoshanyira kunoita rwendo rwako, zvakatowanda, akasiyana uye asingakanganwiki. Nepo vafambi vazhinji vanopfuura nemunzvimbo, kuzvipira munharaunda kana mhuka dzesango, semuyenzaniso, inzira yakasarudzika yekufamba. Nenzira iyi, iwe unosvika pakuona nzvimbo dzakanaka uchiita mutsauko uye uchibatsira kuchengetedza chaiyo nzvimbo yaunoshanyira uye nevanhu vanoita kuti ive inoshamisa..
Uyezve, nhasi kune masangano akawanda anopa pekugara, kutakura, uye mari shoma yevanozvipira. Nokudaro, unogona kuzvipira nevana muAfrica, munhu nzvimbo yemhuka dzesango nzvimbo yemhuka dzesango, nzvimbo yemhuka dzesango, nzvimbo yemhuka dzesango.
Munich kuna Hallstatt Zvitima
Innsbruck kuna Hallstatt Zvitima
Passau kuna Hallstatt Zvitima
Rosenheim kuna Hallstatt Zvitima
2. nzvimbo yemhuka dzesango
nzvimbo yemhuka dzesango. Cruising ndiyo imwe yenzira gumi dzekugadzira dzekufamba kuenda kunzvimbo dziri kure. Semuyenzaniso, munhu nzvimbo yemhuka dzesango, kana kuti kuCaribbean, ndiyo nzira yakanakisa yekusvika kunzvimbo idzi dzakanaka.
Mukuwedzera, kutora rwendo kunokuchengetedza dambudziko rekuyambuka bhodha uye mavhiza. Uyezve, unogona kushanyira nyika dzakawanda parwendo rumwe chete. saka, kutora rwendo kunokuchengetedza dambudziko rekuyambuka bhodha uye visa, kutora rwendo kunokuchengetedza dambudziko rekuyambuka bhodha uye visa, kutora rwendo kunokuchengetedza dambudziko rekuyambuka bhodha uye visa.
3. nzvimbo yemhuka dzesango: Home Exchange
kutora rwendo kunokuchengetedza dambudziko rekuyambuka bhodha uye visa, kutora rwendo kunokuchengetedza dambudziko rekuyambuka bhodha uye visa, ari kutora rwendo kunokuchengetedza dambudziko rekuyambuka bhodha uye visa kutora rwendo kunokuchengetedza dambudziko rekuyambuka bhodha uye visa. Pfungwa kuseri kwemba ndeyekuti unogona kuchinjana dzimba nemunhu wese pasi rese. zvisinei, izwi rekutanga nderekuti muridzi anobvuma kutengesa nzvimbo uye kugara mumba mako. saka, kutora rwendo kunokuchengetedza dambudziko rekuyambuka bhodha uye visa, unoronga mazuva ekufamba, nguva yekugara, uye imba yaunosarudza inofanira kunge iri mumutengo weimba yako.
Neiyi nzira yekugadzira yekufamba, unogona kufamba zvakanyanya asi uchibhadhara zvishoma. saka, Kutsinhana kwemba ndiyo imwe yedzakanakisa nzira dzekufamba nekuti hausi kugara muhotera asi uchinakidzwa nemba kure nemhepo yekumba.. Uyezve, kuchinjana kumba inzira yechokwadi uye inokwanisika yekufamba, zvakasiyana nekugara kwehotera kana Airbnb.
4. nzvimbo yemhuka dzesango: Hot Air Balloon
Kubhururuka pamusoro pekutama kukuru muAfrica kana nzvimbo inoshamisa yeKapadhokiya, Chikonzero chikuru chekusarudza kufamba kuenda kunzvimbo dziri kure uye dzakakosha ndechekuti unogona kungoona runako rwavo kubva muchikepe mumvura yavo.. Nepo vafambi vazhinji vanoongorora netsoka, Chikonzero chikuru chekusarudza kufamba kuenda kunzvimbo dziri kure uye dzakakosha ndechekuti unogona kungoona runako rwavo kubva muchikepe mumvura yavo., Chikonzero chikuru chekusarudza kufamba kuenda kunzvimbo dziri kure uye dzakakosha ndechekuti unogona kungoona runako rwavo kubva muchikepe mumvura yavo., Chikonzero chikuru chekusarudza kufamba kuenda kunzvimbo dziri kure uye dzakakosha ndechekuti unogona kungoona runako rwavo kubva muchikepe mumvura yavo..
saka, unogona kuedza mhepo inopisa bharumu kukwira kunzvimbo dzakasiyana-siyana muEurope. Semuyenzaniso, Teki, Speini, uye Umbria yakanaka muItaly inzvimbo dzakakurumbira dzekufamba kwemhepo inopisa. saka, kana usingatyi nzvimbo dzakakwirira, ipapo mhepo inopisa bharumu kukwira chiitiko chaunofanira kuedza kamwechete muupenyu hwako.
Dijon kuna Provence Zvitima
Paris kuna Provence Zvitima
Lyon kuna Provence Zvitima
MuMarseilles kuna Provence Zvitima
5. Agritourism Travel
Tese tinoshanda nesimba kuti tifambe zvakanyanya, uye vazhinji vedu tinofara kutizira kunzvimbo yakanaka yekuenda uye togara kumashure. zvisinei, agritourism ndiyo mhinduro kune avo vari kutsvaga chiitiko chakasiyana. Nemamwe mashoko, agritourism inosanganisira kushanda nesimba, asi zviri pachena, mumunda wemizambiringa weTuscany, semuyenzaniso, kana kuti papurazi rinogadzira oiri muGreece.
Nenzira iyi, unowana mabhenefiti anoshamisa, pasina kunyura munzvimbo dzinodiwa kwazvo pasirese, zvinenge zvemahara. Semuyenzaniso, unogona kuwana pekugara mahara, chikafu chitsva, uye maonero anoshamisa uchizorora pasi pemuti wemuorivhi kana kunwa Cabernet muItaly. ichi eco ushamwari nzira yekufamba yakajairika nhasi sezvo vafambi vachishuvira kubatana nezvisikwa uye kubatsira munharaunda dzakasiyana.
Hamburg kuenda Berlin Chitima
6. nzvimbo yemhuka dzesango: Mhenderekedzo kuenda kuCoast Chitima
Kuona maonero achichinja kubva mukunyaradzwa kwechitima chedeluxe ndeimwe yenzira gumi dzekugadzira dzekufamba. nhasi, unogona kufamba nekukurumidza uye zvakanaka mukati memazuva mashoma, kubva kuno rumwe rutivi rwenyika kusvikira kuno rumwe. Uyezve, nzira dzezvitima dzakakurumbira, kusanganisira iyo Venice Orient Express, Trans-Siberian chitima, uye Jungfrau njanji, inogona kukuendesa kunzvimbo dzinoshamisa kwazvo munyika.
Chinhu chakanakisa nezvekufamba kwechitima ndechekuti inokuchengetedza nguva yekutarisa paairport, uye kupfuura zvose, unogona kuyemura nzvimbo inokatyamadza yenzvimbo padanho reziso pane kubva pakuona kweziso reshiri. Makambani makuru echitima anopa akarara chitima matikiti pamitengo inokwanisika uye mumamiriro ezvinhu akanaka. Nokudaro, dzimwe dzezvitima nzendo dzinoyevedza munyika dzinogona kuve nzira yekugadzira yekufambisa yevafambi pane chero bhajeti. Coast to Coast chitima nzendo ndiyo imwe yepamusoro nzira kufamba nyika.
7. nzvimbo yemhuka dzesango: Atlantis Submarine
Iyi nzira yakasiyana yekufamba inotora mufambi kusvika pakadzika pegungwa. Kufamba pasi pemvura kunotora chimiro chakasiyana zvachose. Nokudaro, iyo Atlantis submarine inzira yakasarudzika yekufamba muHawaii, Mekisiko, uye Gungwa reCaribbean, mumapoka kusvika 48 vakatakurwa. Uyezve, nekusarudza iyi nzira isina kujairika yekufamba, nerubatsiro rwengowani yakakosha, unogona kunyudza iwe pachako munyika yakanaka yemakorari, hove, uye nyika ine mavara iri pasi pemvura.
Paunenge uchifamba muAtlantis submarine inonakidza kwazvo, rwendo ipfupi kana zvichienzaniswa nedzimwe nzira pfumbamwe dzekugadzira dzekufamba. Rwendo muAtlantis submarine iri 45 maminetsi mune imwe neimwe ye 12 ngarava dzepasi pemvura pasi rose, asi irwendo rwakasiyana uye rwusingakanganwiki rwauchave narwo!
Kana iwe uchida rusununguko rwakakwana rwekufamba, kuhaya motokari yekuvaraidza inogona kuva sarudzo yakakwana. Sezvo kufamba kweRV kunobvumidza iwe kupaka zvakanyanya nzvimbo dzinoshamisa muEurope, kana kuti pasina sevhisi yehotera kana nguva yekubuda inogona kukurumidzira kubva pakunakidzwa nekuona zvinoyevedza.
Pamusoro pe, Kufamba kweRV ndeimwe yenzira dzisina kujairika dzekufamba nekuti imbozha. Havasi vafambi vazhinji vanonzwa vakasununguka zvakakwana kutyaira kune dzimwe nyika, ndodawo ne RV camper. Uyezve, kufamba muRV zvinoreva kuti unogona kufamba munzvimbo dzisina ruzivo rwevashanyi. saka, zvingave zvakanaka kana iwe wakanyatso gadzirira uine mepu uye mafambiro kana mufambi ane hunyanzvi. zvisinei, Kufamba kweRV kwakachipa, inokubvumira kutakura imba yako newe, uye, Chikurukuru, iva nenguva yehupenyu hwako.
Imwe yedzakanyanya kugadzira nzira dzekufamba iri kushanda murwendo rwekufamba semurairidzi. Kufamba kweAdventure kwakanakira vafambi vanoshingaira vanofarira kugadzira-yakagadzirwa, nzendo dzine simba mumapoka maduku. Uyezve, kushanda murwendo rwekushanya kunopa mubhadharo wakanaka uye nzendo dzakasarudzika kuenda kunzvimbo dzakasiyana. saka, unobhadharwa uye unoita zvaunoda uchive nenguva yakanaka yehupenyu hwako.
Semuyenzaniso, the, paragliding, kana vadzidzisi vemitambo yemvura vanobatsirwa nekufambisa kwemahara, pokugara, uye maonero anoshamisa. Kunyange zvakadaro, kushanda murwendo rwekushanya kunoda ruzivo rwepamusoro munharaunda yauri kuenda uye hunyanzvi. Saka nepo rwendo rwekufamba iri nzira yekugadzira yekufamba, ndeyemwaka uye yakachengeterwa vafambi vashoma.
10. Kudzidza mhiri
Hapana nzira iri nani yekufamba kupfuura kudzidza mutauro wekunze kana kutora kosi yehunyanzvi munzvimbo inorota. Mapurogiramu mazhinji emitauro anopa pekugara uye art retreat mapakeji, kusanganisira kudya uye kushanya kwetsika. Pamusoro pe, unosangana nevamwe vafambi uye nokudaro unodzidza nezvekwavanobva.
saka, kudzidza kunze kwenyika inokutendera kuti upedze mazuva anopfuura maviri kwaunenge uchienda uye kusanganisa neveko. Kunyangwe iri nzira inodhura yekufamba, kudzidza kunze kwenyika inzira yakasarudzika yekuona nyika uye imwe yegumi nzira dzekugadzira dzekufamba.
Cannes kuenda kuParis Zvitima
Cannes kuenda kuLyon Zvitima
pano pa Chengetedza Chitima, isu tichafara kukubatsira kuronga isingakanganwike yegungwa-ku-kumahombekombe chitima rwendo.
Iwe unoda here kumisa yedu blog positi "10 Inoshamisa Wedding Destinations MuEurope”Pane yako saiti? Unogona kutora mafoto edu uye kutumira mameseji kana kutipa chikwereti nekubatanidza kune ino blog post. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fcreative-ways-travel%2F - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
kugadzira	CreativeTravel	CreativeWaysToTravel	uniquewaystotravel
Rovedza Kufamba Belgium, Dzidzisa Kufamba Holland, Chitima Kufamba Luxembourg, Chitima Kufamba The Netherlands, Famba Europe
5 Mabhawa Akanakisisa Ane Mimhanzi Yepamoyo MuEurope
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Luxembourg, Chitima Kufamba The Netherlands, Rovedza Kufamba Matipi, Famba Europe